Social Media PR - Ihe Ize Ndụ na wardsgwọ Ọrụ | Martech Zone
Social Media PR - Ihe egwu na ụgwọ ọrụ
Fraịde, Ọgọstụ 28, 2009 Sunday, Eprel 24, 2016 Bọọlụ Lorraine
Ọtụtụ afọ gara aga, achọpụtara m uru dị na ntanetị dị ka ụzọ iji gbasapụ ahịa m maka ndị ahịa m. Na mgbakwunye na ido onwe m n'okpuru saịtị akụkọ, emepụtara m saịtị m - Indy-Biz, dị ka ụzọ isi kesaa akụkọ ọma gbasara ndị ahịa, ndị enyi na obodo biz.
Ruo ihe karịrị afọ abụọ, saịtị ahụ abụwo mmeri-mmeri-mmeri. Ihe niile dị mma, rue ụnyaahụ, mgbe onye na-enweghị obi ụtọ kwuru okwu na-adịghị mma. Nkwupụta a bụ nzaghachi maka akụkọ gbasara azụmaahịa mpaghara, nke ezigbo enyi m na-agba.
Ka m na-enyocha okwu ahụ, echeghị m ihe m ga-eme. Ihe m choro ime, bu ihichapụ ikwu. Kedu ka o si kwuo na ọ bụ enyi m? Mana ihichapụ azịza a ga-emebi ntụkwasị obi m wuru na ndị na - agụ akwụkwọ m. Ma ọ bụrụ na ọ bụ n'ezie iwe, ọ ga-dị nnọọ gwa ndị ikwu ebe ọzọ na net.
Kama, M gwa nzaghachi, na-ekwenyeghi n'ihe o dere, ma nye enyi m “isi”. Ọ gwara ọtụtụ ndị ọzọ nọ n'ógbè ahụ ka ha biputere echiche. Mgbe ahụ, ọ gbakwunyere azịza ya, na-agba onye ahụ na-enweghị obi ụtọ ume ka ọ kpọtụrụ ya ozugbo, ịnakwere nọmba ekwentị dị na mbupụta mgbasa ozi mbụ ahụ ezighi ezi.
Na njedebe, nke a bụ nnukwu ihe ọmụmụ gbasara etu ụlọ ọrụ kwesịrị iji mgbasa ozi mmekọrịta iji jikwaa aha na aha ha n'ịntanetị. Cannot nweghị ike igbochi ma ọ bụ ijikwa okwu na-adịghị mma. Ha ga-adi. Mana ọ bụrụ na ịnwere ndị agha na-eguzosi ike n'ihe, ha ga-agbachitere gị, ma nyere gị aka ijikwa ọnọdụ ahụ. Na mgbakwunye, kama izo na aja, ịgakwuru ndị ahịa ma ọ bụ ndị nkatọ na-enweghị obi ụtọ na nnọkọ ọha na eze, ga-ewusi aha gị ike.
Tags: commentikwu okwu n'ezi okeIndy Bizjikwaa okwuokwu na-adịghị mmaEgwu na ụgwọ ọrụelekọta mmadụ media
Ọchịchị Social: Indiana Leadership Association
Aug 28, 2009 na 4:53 PM
Ahụrụ m nke a dịka ọ na-apụta ụnyaahụ ma ọ kwughachiri nkwenkwe m na ọ bụrụ na ị nwere ike ịzụlite ma tolite obodo na-eguzosi ike n'ihe, ndị na-ezighi ezi na ịgha ụgha na-agba ọsọ ngwa ngwa. N'otu oge okwu na-adịghị mma anaghị abụkarị ihe dị njọ dịka ha na-enye anyị ohere ige ntị ma mezie ihe ọ bụla mehiere.
Aug 28, 2009 na 5:22 PM
Ekwere m mgbe niile na ọ ga-abụ ikpe ahụ, ọ dị mma ịhụ mgbasa ozi mmekọrịta!